I-E-Book vs Incwadi Yamaphepha | Izincwadi Zamanje
Incwadi ye-E-book vs Paper
Iminyaka edlule ngokubonakala kwencwadi ye-elekthronikhiLabo bethu ababengabafundi "bendabuko" ngokwengeziwe futhi bakwazisa ukufunda incwadi enokuthintana nayo "ukuthintana ngokomzimba" sibeka izandla zethu emakhanda ethu. Kwakunemibono eminingi futhi cishe konke kuqinisekisiwe, noma kunalokho, kuyikhulise kabi i- ukunyamalala kwencwadi yephepha ngendlela eqhubekayo nehlabayo.
Ngenhlanhla, akwenzekanga kanjalo futhi akanazo izimpawu "ezicacile" zalokhu ezokwenzeka esikhathini esizayo. Kuyiqiniso ukuthi ukuba nencwadi ye-elekthronikhi elayishwe inqwaba yezincwadi kwenza impilo ibe lula kakhulu, ikakhulukazi maqondana nesikhala, kepha lokhu akusho ukuthi singakwazi futhi sifuna ukuba nezincwadi ezithile ezibaluleke kakhulu noma esizithandayo ikakhulukazi, ngefomethi yephepha.
Ngiyazi ngoyinki omuhle, angikaze ngikusho kangcono lokho kukhona abathembekile futhi abathembekile ephepheni abenqaba ngokuphelele ukuthola incwadi ye-elekthronikhi. Njengoba ngazi, kunabafundi ngakho "kwezobuchwepheshe" futhi okusebenzayo, ukuthi njengoba bathenga noma banikela nge e-ncwadi, umqondo okude wokuthenga incwadi yamaphepha futhi awufiki kubo. Yebo, indatshana yanamuhla ihloselwe zombili izinhlobo zabantu: «Incwadi ye-elekthronikhi nebhuku lephepha».
Okulandelayo, sizobuyekeza ezinye izinzuzo nezingozi ngalunye lwalezi zakhiwo ... Sithemba ukukholisa abaningi kini umqondo omuhle wokushintshanisa amafomethi womabili wokufunda.
1 Ubuhle nobubi bencwadi yephepha
2 Ubuhle nobubi be-e-book
Ubuhle nobubi bencwadi yephepha
Iphunga lakhe: akukho njengokuthenga incwadi, uyivule futhi unuke lelo phunga lamaqabunga amasha.
El vula ikhasi uye ekhasini, oxhumana naye, faka izichasiselo ezincane ngokujwayelekile okunamathelayo, yima ukudwebela ipensela ibinzana esilithanda kakhulu, thatha incwadi yethu yokubhalela noma incwajana yokubhala bese ukopisha ngesandla lelo binzana ebesilithanda futhi lasigcwalisa kangangokuthi asifuni ukulikhohlwa.
Zibeke eshalofini lethu njengengcebo encane yomuntu ngamunye size sibe neqoqo elikhulu kakhulu kangangokuthi lisenza siziqhenye ngathi.
Ayinawo amabhethri, ihlala ikhona, ilungele ukuthi uyivule noma kunini lapho ufuna khona. Akudingi ukunikezwa kwamandla, ukumane unakekele futhi utotise ukuze kungonakali kakhulu.
Ungakwazi yiyekele komunye umuntu (noma inini uma ufuna).
Kuyinto isipho esihle sabathandi bokufunda. Labo abathanda ukufunda, labo abasebenzisa yonke imizuzu emihlanu abanayo mahhala yokufunda phakathi kwesibopho nesibopho, ngeke bathokoze noma yini njengencwadi enhle njengesipho.
Ukuhambahamba esitolo sezincwadi noma umtapo wezincwadi uzoba nenjabulo ye- thola leyo ncwadi owawungayazi okwamanjeFuthi lokho okuhlangenwe nakho kuqondwa kuphela yilabo bethu abathanda ukuzungezwa yizincwadi ezingenakubalwa.
Ngokuhamba kwesikhathi uma bengazinakekeli kancane kungonakala, okuzoholela ekulahlekelweni yincwadi. Kodwa-ke, sonke sithanda izincwadi ezindala futhi ezisetshenzisiwe ... Ngingazifaka kanjani? Banamasiko amaningi.
Izindleko zayo eziphezulu. Yize kunezinhlobo eziningi zamaphakethe ezenza kube lula kakhulu kithi ukuthenga izincwadi zamaphepha, zisabiza kakhulu ngokuya ngamaphakethe.
Bangasikhipha kuleli gumbi abakulo ukungabi nasikhala. Kukhona labo abanesikhala esincane kakhulu sokubeka izincwadi ngakho-ke lokhu kungaba yinkinga enkulu ngokuhamba kwesikhathi uma uthenga izincwadi eziningi zamaphepha.
Ubuhle nobubi be-e-book
Inzuzo enkulu yama-e-book kunezincwadi zamaphepha yilokho ungathathi isikhala, yi-MB kuphela. Ngakho-ke abaqoqi uthuli futhi akudingeki ubahlanze njalo kancane, akudingeki ukhathazeke kakhulu uma kukhulunywa ngokuthi ngibahlela ngayiphi indlela emashalofini, njll.
Akunandaba ukuthi unamaphi amakhasi (njengoba kunjalo "Izinsika zomhlaba"), ngeke zikukala esikhwameni sakho semali noma esikhwameni semali.
Abanye zishibhile kakhulu kunezincwadi. Futhi ngithi ezinye, ngoba ezinye azifani ngentengo (funda ngezansi ngaphansi kwe- "cons").
Ungafunda i- incwadi efanayo kumadivayisi amaningi kagesi, Ngiyabonga ukuvumelanisa. Uma une-ebook yakho noma incwadi ye-elekthronikhi evumelanisiwe neselula yakho, 'ithebhulethi' noma ilaptop, ungaqala ukufunda incwadi yakho kwikhompyutha yakho bese ugcina ngokunethezeka embhedeni ne-ebook yakho.
Ungakwazi chaza futhi udwebele.
cunt ezinye awudingi okokufaka okungeziwe ukuze ukwazi ukuwafunda, ngoba iza nokukhanya okuhlanganisiwe.
Ungaba ne-ebook yakho ngokushesha, ngaphandle kokulinda nangokuchofoza kabili noma kathathu nje. Awudingi ukulinda ukuya esitolo sezincwadi noma kumtapo wezincwadi.
Ingakushiya uqamba amanga endaweni ethakazelisa kakhulu yokufunda lapho ibhethri liyaphela.
Abanye ebooks banamanani aphezulu kakhulu (ezinye zingaphezu kwezincwadi eziningi zamaphepha).
Akubona bonke abantu, ngoba kudinga ulwazi oluyisisekelo noma oluncane lobuchwepheshe (ayifanele abantu abadala abangazi lutho ngobuchwepheshe).
Es Kulula kakhulu ukuzigenca, ngalokho ecabanga ukulahlekelwa okukhulu kwezomnotho kubalobi bayo.
Ngemuva kwamakhulu eminyaka sifunda ephepheni, asikaze sikujwayele ukungakwazi ukuthinta amakhasi noma ukuhogela iphunga lawo.
Futhi ngokusho lokho, asibheje ukuhlala kwazo zombili izakhiwo zokufunda njengoba besikwenza kuze kube manje.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » eziningana » Incwadi ye-E-book vs Paper
URuth Dutruel kusho
Akusho ukuthi ngithanda izincwadi eziphrintiwe, kepha angivaliwe ukuthi kungenzeka ngifunde ku-pdf. Ubuhle bencwadi engaphrintiwe ukuthi bufinyelela ngisho nasekhukhwini, kanti amaphepha kwesinye isikhathi awaneli esikhwameni. Kepha akudingeki ukuthi ube ngumuntu ongahambisani nokulingwa okungcono ngawo womabili amafomethi.
U-Alberto Diaz kusho
Ngiyavumelana nalokho okushoyo. Ngikhetha izincwadi zamaphepha futhi mhlawumbe yingakho kungithathe isikhashana ukuqala ukufunda kumfundi we-e-book. Noma kunjalo, angizivaleli ekufundeni ngefomethi yedijithali. Kulungile ukuzama izindlela zombili zokufunda.
Ukubingelela okubhaliwe. Kusuka ku-Oviedo.
Phendula u-Alberto Díaz
uDavid Ramos kusho
Okunye ukungalungi, (kwencwadi ye-elekthronikhi kuleli cala), amadivayisi edijithali ngokuhamba kwesikhathi alimaza amehlo ngaphezu kwencwadi yendabuko enokukhanya okulungile.
Phendula udavid ramos
Amathiphu wokwethula incwadi
Izindaba zokuhlela kuleli sonto (Juni 6-10)